सीके राउतलाई कुनै हालतमा छाडिन्नः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २३ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सीके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने बताएका छन् । शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । ‘सीके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ । खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ ? यो सम्भव छैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु… विस्तृत समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेस सशंकित
काठमाडौं, २३ माघ । स्थानीय चुनाव आगामी जेठमा गर्ने प्रतिबद्धताविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मंसिरमा सार्ने पक्षमा लागेपछि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस सशंकित भएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मधेसी मोर्चाका नेतासँगको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लागेपछि मात्र चुनाव मिति घोषणा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिबाट उनले जेठमा चुनाव टारेर मंसिरमा गर्न खोजेको आशंका कांग्रेसका नेताहरूले गरेका छन् ।… विस्तृत समाचार
संशोधनमा सरकार असफल
काठमाडौं, २३ माघ । मधेसी मोर्चाको सहयोगमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मुख्य संलग्नतामा संविधान संशोधनसहित संविधान कार्यान्वयनलाई फास्ट ट्र्याकमा राख्न र भूकम्पपीडितलाई राहत दिन सत्तामा आएको सरकारको ’रिपोर्टकार्ड’ निराशाजनक देखिएको छ । भागबन्डाका आधारमा सत्ताको बाँडफाँट गर्दै गठन भएको सरकार कार्यकालका छ महिनासम्म पनि मूल एजेन्डामा असफल बनेको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डा थाती रहँदा सरकारले निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गर्नसकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले… विस्तृत समाचार
प्रधानमन्त्रीको पार्टी्भित्रै आलोचना
काठमाडौं, २३ माघ । संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावको प्रतिबद्धता लिएर ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘कार्यकाल सकिन लाग्दा’सम्म दुवै प्रयासमा असफल बन्दै गएका छन् । आफ्नै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई हटाएर उनले यी दुई काम गर्ने वाचासहित कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको सहयोगमा सत्तारोहण गरेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘नौ महिनाको आलोपालो’ मा सहमत हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले ६ महिना बितिसक्दा… विस्तृत समाचार
विद्यालय सुधार्न युवा अग्रसर
रामेछाप, २२ माघ । रामेछापको बिजुलीकोट गाविस वडा नम्बर ६ कल्लेरीस्थित रुपादेवी आधारभूत विद्यालयका लागि कोष स्थापना गरिएको छ । शिक्षक अभाव झेल्दै आएको यस विद्यालय सञ्चालनका लागि बिहीबार भृंगेश्वर सेवा समाजको अगुवाइमा रुपादेवी कल्याणकारी कोषको औपचारिक स्थापना गरिएको हो । राष्ट्रिय गीतका रचनाकार व्याकुल माइलाले दाताहरूको नाम समेटिएको शिलालेख अनावरण गरेर कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । स्थानीय मोहनबहादुर मगरको परिकल्पना तथा समाजको अगुवाइमा… विस्तृत समाचार
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमाः उमेर फेरेको आरोप
काठमाडौं, २२ माघ । नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति इन्कार गरेको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीवरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । ‘बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा’ जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ… विस्तृत समाचार
​प्रधानमन्त्रीको नियतले गम्भीर आशंका : एमाले
काठमाडौं, २२ माघ । मिति घोषणाबिनै सरकारले निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न निर्देशन दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचन हुनेमा आशंका गरेको छ । मधेसी दलहरूलाई मनाउने नाममा मिति घोषणामा आलटाल भइरहेको आशंका एमालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । ‘प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई मनाउन सरकार बनेको दिनदेखि नै कोसिस गरिराख्नुभा’को छ, तर उनीहरू प्रदेशको निर्वाचन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने बताइराखेका छन्, अब उहाँले… विस्तृत समाचार
दाहालको ‘यू–टर्न’ !
काठमाडौं, २२ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय चुनावको तयारीबारे निर्वाचन आयोगलाई चिठी लेखे पनि पत्रमा मिति उल्लेख नगरेको खुलासा गर्दै ‘नआत्तिन’ मधेसी मोर्चालाई बचन दिएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘जेठ १० भित्र चुनाव गर्ने गरी आयोगलाई पत्र लेख्ने’ निर्णय लिएको २४ घण्टा नबित्दै ‘यू–टर्न’ लिएका दाहालले शुक्रबार बालुवाटारमा मोर्चाका नेताहरूसँग वार्ता गर्दै ‘आयोगलाई पठाएको पत्रमा मिति उल्लेख नगरिएको’ जानकारी गराएका हुन् । मोर्चालाई दिएको… विस्तृत समाचार
जन्मेको ३ घण्टामै शिशु चोरी
काठमाडौं, २२ माघ । प्रसव बेथाले च्यापेपछि वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१ छपकैयाकी रमावतीदेवी पासवानले जेठी बुहारी आशादेवीलाई शुक्रबार बिहानै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पु‍¥याइन् । आमा र पेटमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्य ठीक थियो । आशादेवीले अस्पतालको प्रसूति वार्डमा १० बजेर ४० मिनेटमा सामान्य अवस्थामै छोरो जन्माइन् । कान्तिपुर दैनिकमा भूषण यादवले समाचार लेखेका छन् । बच्चा सफा गरेर नर्सले हजुरआमा (रमावती) को जिम्मा लगाए । अनि सुत्केरीलाई वार्डमा… विस्तृत समाचार
‘जनतालाई समृद्धिको बाटो देखाउने जिम्मा एमालेको काँधमा’
२१ माघ २०७३
​सर्लाही, २१ माघ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेलले अबको २५ वर्षभित्रमा सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउन एमालेको भूमिका रहने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका भवनमा सम्पन्न नेकपा एमाले नगरस्तरीय जिल्ला प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । लालबन्दी र हरिऔन नगरपालिकामा चलेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको लालबन्दीमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेल र हरिऔनमा अर्का… विस्तृत समाचार
‹ First Newer 290 291 292 293 294 Older Last ›